၁၅​ပေနက်​တဲ့ ဂူကြီးထဲဝင်ပြီး တရားမှတ်နေတုန်း သဘာဝလွန်​ဖြစ်​ရပ်​တစ်​ခုနဲ့ ကြုံ​တွေ့ခဲ့ရ​တဲ့ ​ကျော်​သူ – Lawkathuta
၁၅​ပေနက်​တဲ့ ဂူကြီးထဲဝင်ပြီး တရားမှတ်နေတုန်း သဘာဝလွန်​ဖြစ်​ရပ်​တစ်​ခုနဲ့ ကြုံ​တွေ့ခဲ့ရ​တဲ့ ​ကျော်​သူ
ထူးဆန်းထွေလာ May 19, 2018
လွန်​ခဲ့တဲ့ဆယ်​စုနှစ်​တစ်​ခု​လောက်​က မြန်​မာပြည်​ရဲ့အခန့်​ဆုံးမင်းသား​တွေထဲက တစ်​ဦးအပါအဝင်​ဖြစ်​ခဲ့တဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​​ကျော်​သူက​တော့ အခုချိန်​ထိလဲ အနုပညာကို အနက်​ရှိုင်းဆုံးခံစားပြီး​တော့ ပြုလုပ်​​နေဆဲပါ။ ​ကျော်​သူက​တော့ လူတိုင်းမလုပ်​နိူင်​တဲ့ ပရဟိတအလုပ်​​တွေကိုလည်း သူ့ရဲ့လက်​နဲ့ကိုယ်​တိုင်​ အစွမ်းကုန်​လုပ်​​ဆောင်​​နေသူတစ်​ဦးပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ဘာသာ​ရေးအရမ်းလိုက်​စားတဲ့ ​ကျော်​သူက​တော့ ၁၅ ​ပေနက်​တဲ့ ဂူကြီးထဲကိုဝင်​ပြီး တရားမှတ်​​နေတုန်း သဘာဝလွန်​ဖြစ်​ရပ်​တစ်​ခုနဲ့ ကြုံ​တွေ့ခဲ့ရတာပါ။ ​ကျော်​သူရဲ့ အ​တွေ့အကြုံ​တွေကိုချစ်​ပရိသတ်​​တွေအတွက်​ ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။
​ကျော်​သူက​တော့ “ဂူအနက်က (၁၅)ပေခန့်။ အနေအထားက မြေပြင်မှတည့်တည့်မတ်မတ်။ တည်ရှိရာက ပန်းတောင်းမြို့နယ် ဖိုးဦးတောင် ထူးခြားချက်က မြတ်စွာဘုရားခြေတော်ချခဲ့တဲ့ ​တောင်တော်ပေါ်ရှိ အဘဘိုးဘိုးအောင်ကျင့်ကြံခဲ့တဲ့ဂူ။ အတွေ့အကြုံကတော့ ခဲရာခဲဆစ်ခြေကိုကန် ကျောနဲ့တွန်း၍ဆင်းခဲ့ရသည်။အောက်ရောက်ရောက်ခြင်း အသက်ရှူမ၀ မောဆို့နေသည် ခေတ္တခဏနား၍မြေပြင်သို့ ထိုင်လိုက်စဉ် လူတစ်ထိုင်စာနေရာသာရှိသည်ကို သတိထားမိသည်။ ​လေ၀င်ပေါက်လုံးဝမရှိပေ။သို့သော်တရားမှတ်မေတ္တာပို့ရင်းဖြင့်လေကောင်းမွန်စွာရရှိခဲ့သည်။
ရှုမှတ်ပုံကတော့ အသုဘကမ္မဌာန်း။ အတွေ့အကြားက မြေကြီးတွင်းမှသဘောင်္ကြီးရေပြင်ကိုခွဲပြီးခုတ်လာသံလိုလို မြေတူးစက်ကြီးမိမိအနားသို့ရောက်လာသံလိုလို။ ဘာမှန်းတော့ မသိ အပေါ်သို့(၁၅)မိနစ်ခန့်တရားမှတ်ပြီးပြန်တက်လာတော့သည်။ အဖြေ ကား ??? ထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများ အလင်းပြပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့်…ကျော်သူ။” ဆိုပြီး သူကြုံ​တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ထူးဆန်းမှုကြီးကို အ​ဖြေရှာမရတာ​ကြောင့်​ နားလည်​တတ်​ကျွမ်းသူ​တွေကို အကူအညီ​တောင်း ​မေးမြန်းထားပါ​သေးတယ်​။
ပရိသတ်​​တွေ​ရော ​ကျော်​သူကြုံ​တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ထူးဆန်းမှုကြီးကို ဘယ်​လိုထင်​မြင်​မိလဲဆိုတာ ​ပြောသွားခဲ့ပါဦး​နော်​။
Source:Kyaw Thu’s Facebook
လှနျ​ခဲ့တဲ့ဆယျ​စုနှဈ​တဈ​ခု​လောကျ​က မွနျ​မာပွညျ​ရဲ့အခနျ့​ဆုံးမငျးသား​တှထေဲက တဈ​ဦးအပါအဝငျ​ဖွဈ​ခဲ့တဲ့ သရုပျ​​ဆောငျ​​ကြျော​သူက​တော့ အခုခြိနျ​ထိလဲ အနုပညာကို အနကျ​ရှိုငျးဆုံးခံစားပွီး​တော့ ပွုလုပျ​​နဆေဲပါ။ ​ကြျော​သူက​တော့ လူတိုငျးမလုပျ​နိူငျ​တဲ့ ပရဟိတအလုပျ​​တှကေိုလညျး သူ့ရဲ့လကျ​နဲ့ကိုယျ​တိုငျ​ အစှမျးကုနျ​လုပျ​​ဆောငျ​​နသေူတဈ​ဦးပဲ ဖွဈ​ပါတယျ​။ ဘာသာ​ရေးအရမျးလိုကျ​စားတဲ့ ​ကြျော​သူက​တော့ ၁၅ ​ပနေကျ​တဲ့ ဂူကွီးထဲကိုဝငျ​ပွီး တရားမှတျ​​နတေုနျး သဘာဝလှနျ​ဖွဈ​ရပျ​တဈ​ခုနဲ့ ကွုံ​တှခေဲ့ရတာပါ။ ​ကြျော​သူရဲ့ အ​တှအေ့ကွုံ​တှကေိုခဈြ​ပရိသတျ​​တှအေတှကျ​ ​ဖျော​ပွ​ပေးလိုကျ​ပါတယျ​​နျော​။
​ကြျော​သူက​တော့ “ဂူအနကျက (၁၅)ပခေနျ့။ အနအေထားက မွပွေငျမှတညျ့တညျ့မတျမတျ။ တညျရှိရာက ပနျးတောငျးမွို့နယျ ဖိုးဦးတောငျ ထူးခွားခကျြက မွတျစှာဘုရားခွတေျောခခြဲ့တဲ့ ​တောငျတျောပျေါရှိ အဘဘိုးဘိုးအောငျကငျြ့ကွံခဲ့တဲ့ဂူ။ အတှအေ့ကွုံကတော့ ခဲရာခဲဆဈခွကေိုကနျ ကြောနဲ့တှနျး၍ဆငျးခဲ့ရသညျ။အောကျရောကျရောကျခွငျး အသကျရှူမဝ မောဆို့နသေညျ ခတ်ေတခဏနား၍မွပွေငျသို့ ထိုငျလိုကျစဉျ လူတဈထိုငျစာနရောသာရှိသညျကို သတိထားမိသညျ။ ​လဝေငျပေါကျလုံးဝမရှိပေ။သို့သျောတရားမှတျမတ်ေတာပို့ရငျးဖွငျ့လကေောငျးမှနျစှာရရှိခဲ့သညျ။
ရှုမှတျပုံကတော့ အသုဘကမ်မဌာနျး။ အတှအေ့ကွားက မွကွေီးတှငျးမှသဘောင်ျကွီးရပွေငျကိုခှဲပွီးခုတျလာသံလိုလို မွတေူးစကျကွီးမိမိအနားသို့ရောကျလာသံလိုလို။ ဘာမှနျးတော့ မသိ အပျေါသို့(၁၅)မိနဈခနျ့တရားမှတျပွီးပွနျတကျလာတော့သညျ။ အဖွေ ကား ??? ထဲထဲဝငျဝငျနားလညျတတျကြှမျးသူမြား အလငျးပွပေးပါရနျ လေးစားစှာဖွငျ့…ကြျောသူ။” ဆိုပွီး သူကွုံ​တှခေဲ့ရတဲ့ ထူးဆနျးမှုကွီးကို အ​ဖွရှောမရတာ​ကွောငျ့​ နားလညျ​တတျ​ကြှမျးသူ​တှကေို အကူအညီ​တောငျး ​မေးမွနျးထားပါ​သေးတယျ​။
ပရိသတျ​​တှေ​ရော ​ကြျော​သူကွုံ​တှခေဲ့ရတဲ့ ထူးဆနျးမှုကွီးကို ဘယျ​လိုထငျ​မွငျ​မိလဲဆိုတာ ​ပွောသှားခဲ့ပါဦး​နျော​။
နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ ဘုန်းကြီး ရုပ်ကလာပ်ကို CT scan ရိုက်ကြည့်သောအခါ ထူးဆန်း အံ့သြဖွယ်တွေ့ရှိ
နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ ဘုန်းကြီး ရုပ်ကလာပ်ကို CT scan ရိုက်ကြည့်သောအခါ ထူးဆန်း အံ့သြဖွယ်တွေ့ရှိ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်သက်တမ်းရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး၏ မံမီရုပ်ကလာပ်ကို CT scan ဖတ်ကြည့်ရာတွင် အရိုးများနှင့် ဦးနှောက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟာ ကောင်းမွန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း …
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှသာ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှူုသင့်တဲ့ တောင်ကိုရီးယားက 18+ ပန်းခြံ
ခေါင်းစဉ်တွေ့တာနဲ့ စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဟုတ်…။ ကွီးတို့မွီးတို့ကို တောင်ကိုရီးယားက ထူးခြားတဲ့ ပန်းခြံလေးတစ်ခုအကြောင်းပြောပြမယ်လေ… ကိုရီးယားရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် သွားကြည့်နိုင်တယ်နော်…။ ပန်းခြံရဲ့နာမည်ကတော့ Loveland Theme Park ဖြစ်ပါတယ်…။ ကိုယ်တောင် မျက်လုံးပြူးသွားပြီး ကြည့်ရမှာတောင်ရှက်တယ်… ဒါပေမယ့် မမြင်ဖူးတော့ ကြည့်လိုက်တယ်လေ… ခ်ခ်… ။ Facebook မှာပုံဆန်းဆန်းတင်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ တကယ့်ကိုရှယ်ပါပဲ…။ …
မွေးရာပါ မအင်္ဂါ ၂ ခုပါတဲ့ အမျိုးသမီးက သူ့ချစ်သူနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြောပြထားတာ..တဲ့…။
အမည်မဖော်ပြထားတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်သူမှာ ရှားပါးခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အခြေအနေ တစ်ခုဖြစ်တဲ့လိင်အင်္ဂါနှစ်ခု ပါဝင်လာပါတယ်။ သူမှာ ယောနိလမ်းကြောင်းနှစ်ခုလည်း သီးခြားဆီပါဝင်သလို၊ သားအိမ်လည်း နှစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။ သူမရဲ့ နာမည်ကို NurseryRN လို့ ဖော်ပြထားပြီး၊ သူမက သူရဲ့ချစ်သူနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံကို ပွင့်ပွင်းလင်းလင်း ထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ သူမမှာ …
ထူးခြားဆန်းကျယ်သောနဂါးပလ္လင်ကြီး သဲအင်းဆရာတော်ကြီး၏ကျေးဇူးကိုဆပ်ရန် သစ်တောဝန်ထောက်ကြီးသည် ပဲခူးရိုးမတောနက်ကြီးထဲရှိ ရှားပါးလှသော သစ်ကနက်ပင်ကြီးများကို ရအောင်ရှာလေသည်။ (2 1/2)’ခန့်ရှိသစ်တုံးများလုပ်၏ နဂါးပလ္လင်ကြီးဖြစ်အောင် တပည့်များကိုထွင်းထုစေသည်။ ဖြုတ်၍သိမ်းနိုင်သောကြီးမားလှသည့်နဂါးပလ္လင်ကြီးကိုဆရာတော်ကြီးသို့လာရောက်လှူဒါန်းလေတော့သည်။ သစ်တောဝန်ထောက်၏ ကြီးမြတ်သောသဒ္ဓါတရားကို ဆရာတော်ကြီးက လက်ခံတော်မှုခဲ့သည်။ ”ဦဇင်းမှတစ်ပါး–မည်သူမှ ဒီပလ္လင်ပေါ်မတက်စေနဲ့”ိံ”သီလ-သမာဓိ-ပညာ မပြည့်စုံဘဲဒီပလ္လင်ပေါ်မှာတရားဟောရင်နဂါးမင်းကြီးကခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး” ”အန္တရာယ်ရှိတယ်” ဟုပညတ်တော်မူခဲ့သည်။ 1967 ခုနှစ် တောင်ဥက္ကလာပ …
နှစ်ငါးရာ ကြာအောင် ရေခဲပြင်အောက်မှာ မြုပ်ကွယ်နေတဲ့ မိန်းကလေး
နှစ်ငါးရာ ကြာအောင် ရေခဲပြင်အောက်မှာ မြုပ်ကွယ်နေတဲ့ မိန်းကလေး ================ ကလေးမလေး ရဲ့ အရွယ်က ၁၁ ကနေ ၁၅ ကြားမှာ ရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၁၄၅၀ – ၈၀ ခုနှစ်တုန်းက ရေခဲပြင် အောက်မှာ နှစ်မြုပ်ခဲ့တာ လို့ ယူဆကြပါတယ်။ တွေ …